Ubungozi bezidakamizwa – Buza Noma Yini
3.45K views February 2, 2022 Ezempilo
Bengifisa ukwazi ngobungozi bezidakamizwa?
Anonymous Answered question February 2, 2022
uchwepheshe363	 Posted October 13, 2020	 0 Comments
ukufa kwabantu ezingozini eziningi
ukungenwa yizifo ezithathelwana ngokocansi ezibandakanya ingculaza, kanye nokungena kwabantu emajele, kuyimiphumela wukusetshenziswa kabikwezidakamizwa emphakathini.
Izidakamizwa ngezinye zezinto ezejwayelekile kepha eziguqulwa ngabantu bazenze imikhuba eyehlukene ziphendule ingqondo icabange ngenye indlela. I spirit sisetshenziselwa ukubasa kodwa abantu bayasibhema, amaphilisi nemithiyokwelapha kuhle kodwa abantu bakuxuba kubeyingxube (concoction) elwanemizwa kanye nengqondo. Ake ucabange nje lokhu kwesimanje Iwunga exube i rattex, ARV’s, coccaine izinto eziyingozi kangaka, lowo muntu uzoba njani?
Umuntu waloluhlobo, uma eseqalekile,(ephethwe yi arosta) uhlukumeza ngisho nomndeni wakhe imbala, ensthontsha ekhaya, adlwengule afuneizinto ngenkani, enze neminye imikhuba emibi edalwa wukudakwa. Ukwenza nje isibonelo laphaya KwaSanti kugqekezwa umtholampilo kwebiwaama-ARV’s okukhombisa ngokusobala ukuthi le-wunga impela izobhubhisaisizwe. Ake ucabange nje abantu abazofika bezolanda ama-ARV’S abo kuloya mtholampilo bangabe besawathola ngenxa yezigilamkhuba ongazi ngempela ukuthi zingenelwe yini.
Abantu abasha badinga ukubhekwa ngeso elibukhali ngoba izingqondo zabo zisezintsha, manje bayathanda ukufunda okusha(experiment). Uma abazali bengaqaphelanga umuntu omusha uyadlubulundela asebenzise lezizinto ngenxa yokududana nabangani. Abazali bayaba yimbangela yokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa. Uma ingane yakho ingasebenzi, ingafundi kodwa ifuna imali kuwe mzali, uthi ifuna ukuyenzani? Uma ibuya nama cellphone nezinto ezibizayo uthi izithathephi? Pho umfihlelani umntanakho emaphoyiseni? Ubona kukhona abantu abasebenza kahle nabami kahle nje, abanye besezinkingeni, isikhathi esiningi yingoba kukhona izinto abangazenzanga ezazenziwa ngabangani babo bona asebesezinkingeni namhlanje.
uchwepheshe Answered question October 13, 2020
Anonymous	 Posted February 2, 2022	 0 Comments